မြစ်ငယ်ဈေး၌ သင်္ကြန်ကာလနီးလာ၍ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည် အားကောင်းလာ - Yangon Media Group
မြစ်ငယ်ဈေး၌ သင်္ကြန်ကာလနီးလာ၍ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည် အားကောင်းလာ
မန္တလေး၊ မတ် ၃ဝ
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက စတင်ရောင်းချလာခဲ့ သည့် တစ်လတစ်ကြိမ်ရောင်းချသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရ ပူရမြို့နယ် မြစ်ငယ်လခချဈေးကြီးမှာ ယခုအခါ သင်္ကြန်ကာလ နီး ကပ်လာချိန်တွင် အရောင်းအဝယ်ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း ဈေး သည်များထံမှ သိရသည်။ ”အရင်လတွေက အရောင်းသိပ်ကိုပါးတယ်။ ဒီလတော့ မဆိုး ဘူးပြောရမှာပဲ။ သင်္ကြန်အခါတွင်းလည်း နီးလို့ထင်ပါရဲ့။ ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်တယ်လေ။ အရင်လတွေဆိုရင် အိမ်ပြန်သယ် ရတယ်။ အခုဈေးရောင်းရတော့ ပျော်ပြီလေ။ အိမ်အပြန်မျက်နှာ ပန်းလှပြီပေါ့”ဟု ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချသူတစ်ဦးကပြောသည်။
လခချဈေးကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဈေးများစွာအနက် မှ ထူးထူးခြားခြား တစ်လတွင်တစ်ရက်သာရောင်းချကြသည့် လခ ချဈေးကြီးဖြစ်ပြီး လခချဈေးကြီးဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ လစဉ်လကုန် ရက်နေ့ တစ်နည်း လခချပေးသည့်နေ့တွင်သာ ဈေးရောင်းချသော ကြောင့် လခချဈေးဟု ဒေသခံများက ခေါ်တွင်ရာမှ အစပြု၍ ယနေ့ အချိန်ထိ လခချဈေးဟု ခေါ်တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်ကာလနီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ယခုလကုန်ဈေးနေ့ တွင် သင်္ကြန်အတွင်း ကလေးကစားစရာပစ္စည်းဆိုင်များ အထူးရောင်း အားကောင်းမွန်ပြီး မြစ်သားနယ်ထွက် ကြက်သွန်သည်များနှင့် မုံရွာနယ်ဘက်မှ သနပ်ခါးသည်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းမှ လာရောက်ရောင်းချသော လက်ဖက်အစို၊ အခြောက် သည်များပါ ရောင်းအားကောင်းမွန်နေသည်။ အဆိုပါဈေးကြီးကို မြစ်ငယ်မြို့ရှိ လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံမှ ကြီးမှူး၍ ရထားစက်ရုံ၏ အဝင်ပေါက် အချိန်မှတ်ရုံးမှ စစ်ကိုင်း မြစ်ငယ်ကားလမ်းမအထိ ဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် နံနက် ၅ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ ရောင်းချကြကြောင်း သိရသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အထက်မြန်မာပြည်မှ ကျောင်း ၄၉ ကျောင်းတွင် အားဖြည့်ဆန် အစားထို??
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုသာလိုဟု Kelly Marie Tran ဆို
တရုတ်နိုင် ငံတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း လီကီမာကြောင့် ၂၈ ဦးသေဆုံး၊ လူ တစ်သန်း ကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားရ
ပုသိမ်ထီးပန်းချီ ရေးဆွဲရာတွင် ရှုခင်း ( ခေါ်) တောကားနှင့် ကနုတ်ပန်း ရေးဆွဲနိုင်သူ အမျိုးသမီး မ?
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးနှင့် ရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်တို့ကို ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖောင်ေ
ဖျာပုံမြို့တွင် သစ်၊ ဝါး၊ ဓနိနှင့် ရာဝင်အိုး အရောင်းဆိုင်များ ဝယ်ယူသူ နည်းပါးနေသဖြင့် လုပ်?